Qiimaha Heshiiska Jurgen Klopp Ee Liverpool Lagu Burburin Karo Oo La Ogaaday Kadib Xidhiidhkii Juventus. - Gool24.Net
Qiimaha heshiiska Jurgen Klopp ee Liverpol oo sareeya.
Qiimaha heshiiska Jurgen Klopp ee Liverpool lagu burbrin karo ayaa la ogaaday kadib wararkii la xidhiidhinayay kooxda Juventus.
Dhawaan waxaa soo baxay war sheegayay in maamulka kooxda Juventus ay xidhiidh la sameeyeen Jurgen Klopp si uu kooxdooda badal ugu noqdo Maxi Allegri oo bixitaankiisa lagu dhawaaqay.
Laakiin inkasta oo la cadeeyay in Jurgen Klopp uu iska diiday fursada uu Juventus ku maamuli lahaa xili ciyaareedka soo socda waxaa kadib la baadhay lacagta lagu burburin karo qandaraaska Kopp ee Liverpool.
Wargayska Tuttosport oo dalka Talyaaniga ka soo baxa ayaa dabagal ku sameeyay mushaarka uu Jurgen Klopp ka qaato Liverpool iyo lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo.
Waxaa la soo ogaaday in Jurgen Klopp uu xili ciyaareedkii Liverpool mushaar ahaan uga qaato ilaa 7 milyan gini iyada oo heshiiskiisa Anfield uu dhacayo sanadka 2022.
Laakiin waxa kale oo xogtan lagu shaaciyay qiimaha lagu burburin karo heshiiska Jurgen Klopp haddiiba ay kooxi si dhab ah u doonayso in ay la saxiixato isla markaana uu isaguna ogolaado.
Jurgen Klopp ayaa Liverpool kaga bixi kara 32 milyan gini taas oo aan ahayn lacag sahlan si ay kooxi tababare ugu kharash garayso.
Qiimaha heshiiska Jurgen Klopp ee Liverpool in uu 32 milyan gini yahay waxay sabab u noqon kartaa kooxda Juventus ayna ku fikirin in ay bixiso maadaama oo ay jiraan tababarayaal si bilaash ah lagu heli karo oo bilaa shaqo ah.
Juventus ayayna wax sahlan u noqon karin in ay Jurgen Klopp ka bixiso 32 milyan gini balse waxaaba kaga sii adag in aanu macalinka reer Germany diyaar u ahayn in uu ka baxo Reds oo uu masharuuc fiican ka samaystay.
Klopp ayaa sheegay in ay kooxdiisa Liverpool qaaday talaabadii ugu horaysay ee ay koobab ugu tartamayso kadib markii ay tartan xoogan oo Premier league ah ay hal dhibic ku seegeen.
Qiimaha heshiiska Jurgen Klopp ee Liverpol oo la ogaaday.
Laakiin Klopp ayaa hadda isku diyaarinaya finalka Champions League oo uu xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah kooxdiisa Reds u soo saaray.
Dhinaca kale waxaa soo baxayay warar sheegaya in Liverpool ay diyaar u tahay in ay heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixato Klopp si ay meesha uga saarto xiisaha kooxaha waa wayn ee Yurub uga imanaya.